အာဏာရှငျတှေ ည၈နာရီရောကျတိုငျး ကွေးစညျသံကွား ခှေးမခံသာသလို ဗနျးထုသံကွား လဒမခံသာရအောငျ
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:19 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အသက်နဲ့ ခန္ဓာ လှူထားပြီးပြီမို့လား..
သေရင် ငရဲမလားဘူးလို့ ပြောထားတယ်လေ..
မြင့်တဲ့ ဘုံကိုတက်သွားတာကို ဘာထိုင်လွမ်းနေရမှာလဲ..
သူက နိုင်ငံတော်ကို လှူထားတာ
မင်းတို့အဖေရဲ့ မဖြစ်စလောက် ဆုကြေးကိုတော့
ခင်ဗျားတို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရမှာက
နိုင်ငံတော်ကို အသက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်
လှူပါတယ်လို့ပြောပြီး ဘာကောင်းကျိုးမှ မလုပ်ပဲ
"သင်သည် ယနေ့မှစ၍ တပ်မတော်နှင့်
သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ..." ဆိုတဲ့
သေမှဖြုတ်ပေးတဲ့ နဖားကြိုးတချောင်းဆိုတာ မမေ့နဲ့..
တခုပဲ .. သိအောင်လုပ်
Credit- Yae Tay Za
များပြားလှတဲ့ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေသွားနေတာတွေကို
လူငယ်တွေရဲ့ တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ မျက်နှာတွေကို..
နှစ်ပေါင်း ၅၀ မပြည့်သေးပေမဲ့
တခဏတွင်း တိုးတက်လာတဲ့ နိုင်ငံ..၊
အဓိကကျတယ်ဆိုတာကို နားလည်တဲ့ ..
ထိုင်းနိုင်ငံကို ကျော်ဖြတ်သွားပြီး ..
ပညာတတ်တွေကို နေရာပေးတဲ့ အစိုးရမျိုး
ငါတို့လို တခြားနိုင်ငံတွေကို..ပညာသားပါပါနဲ့ ..
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဖုံးဖိဖါ လုပ်လို့ကောင်းတုန်း..၊
အဲဒီလိုမျိုး တရှိန်ရှိန် တိုးတက်နေတဲ့
ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံမျိုးကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 5:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:27 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook